December 13, 2008, 12:47 am
နေ၀င်ဆည်းဆာအလှနှင့်အတူ ညနေ(၆)နာရီတိတိမှာ Single မှ Married လို့ ကူးပြောင်းရမယ့် ဒီနှစ် ဒီဇင်ဘာ(၁၃)ရက် မွေးနေ့ကတော့ အမှတ်ရဆုံးအချိန်ပါပဲ။ အမြန်စီစဉ်ဖြစ်ခဲ့သော ဒီမွေးနေ့ပွဲလေးအတွက် အနီးနားဝန်းကျင်က မိတ်ဆွေအနည်းငယ်လောက်နဲ့ပဲ ကျင်းပဖို့ စီစဉ်ထားခဲ့ရတယ်။ ဘလော့ခ်လာလည်သူ မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် အစားအသောက်တွေကို နောက်တရက်မှပဲ ဖော်ပြပေးပါတော့မယ်ရှင် 😛 ။
Comment by :-* December 13, 2008 @ 1:56 am
မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံသော အခါသမယတွေမှာ စုဆုံကျရောက်တဲ့ လင်းလက်ရဲ့ မွေးနေ့ မင်္ဂလာပွဲနှင့် လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲလေးကနေ ရာသက်ပန် မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံပြီး ဒီလင်ဒီမယား အသက်ထက်ဆုံး ချစ်ချစ်ခင်ခင်၊ ကြင်ကြင်နာနာ နားလည်မှုရှိရှိနှင့် ရိုးမြေတကျ အိုအောင်မင်းအောင် ပေါင်းသင်းနိုင်ကြပါစေ။
Comment by Nge Naing December 13, 2008 @ 3:09 am
Comment by Nge Naing December 13, 2008 @ 3:10 am
မွေးနေ့မှသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ သာယာ၊ ချမ်းမြေ့ခြင်းနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော ဘ၀တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်
Comment by နေပြည်တော် December 13, 2008 @ 3:35 am
Congratulation! Very pleased to hear that.
Comment by Steve Evergreen December 13, 2008 @ 4:13 am
Comment by MANORHARY December 13, 2008 @ 5:13 am
Happy Birthday and Congratulation ပါ ညီမလေး.. ၂၀ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ နှင့် ရက်မြတ်မင်္ဂလာမှသည် သာယာပျော်ရွင်ဖွယ် အိမ်ထောင်တစ်ခုကို အေးချမ်းပျော်ရွင်စွာတည်ဆောက်နိုင်ပါစေ..
Comment by phyumay December 13, 2008 @ 6:18 am
နှစ်ကိုယ်တူ ဘ၀သစ်ကို စပြီလေ။
မွေးနေ့မှာ တကယ့်ကို အမှတ်တရ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ဘ၀ဆက်တိုင်း နားလည်ချစ်ကြည်နူးမှုများနဲ့ သာယာချမ်းမြေ့ပါစေနော်။
Comment by မိုးချိုသင်း December 13, 2008 @ 7:17 am
lin let, happy 20th birthday & many congrats4ur wedding! may u hvahappy life ahead! 🙂 wif luv, the reader!
Comment by jezz December 13, 2008 @ 9:41 am
မင်္ဂလာရှိသောမွေးနေ့ နဲ့ လေးဖြစ်ပါစေ။ လာလည်သွားပါတယ်။ 🙂
Comment by A _nam December 13, 2008 @ 5:03 pm
မလင်းလက် … မင်္ဂလာရှိသော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ …
Comment by ဗေဒါရီ December 13, 2008 @ 6:29 pm
ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့ပွဲနဲ့ မင်္ဂလာပွဲလေးဖြစ်ပါစေကြောင်း ညီမလေးရေ။
Comment by s0wha1 December 13, 2008 @ 7:07 pm
ပျော်စရာ မွေးနေ့ပါ ညီမလေး…
၂၀နှစ်မြောက် မွေးနေ့ကစလို့ ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ အားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ပါစေ…
Comment by GreenGirl December 14, 2008 @ 4:23 am
မင်္ဂလာပေါင်းစုံညီပေါ့ဗျာ… အလုံးစုံသော ကောင်းခြင်းများနဲ့ ပြည့်စုံပါစေဗျာ 🙂
Comment by mtj December 14, 2008 @ 4:34 am
ဒီနှစ် ဒီလဟာ ညီမတွက် မင်္ဂလာ အရှိဆုံးလပဲ….
Comment by တက်တူ December 14, 2008 @ 6:48 am
Happy Birthday ပါမလင်းလက် မွေးနေ့ မှာ အရမ်းကိုပျော်မှာပဲနော်။ ကြင်စဥိး ဇနီးမောင်နှံ ကို ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ 🙂
Comment by ဗမာပြည်သား December 14, 2008 @ 6:04 pm
မင်္ဂလာပေါင်းစုံညီပေါ့ဗျာ… အလုံးစုံသော ကောင်းခြင်းများနဲ့ ပြည့်စုံပါစေဗျာ
မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံသော အခါသမယတွေမှာ စုဆုံကျရောက်တဲ့ လင်းလက်ရဲ့ မွေးနေ့ မင်္ဂလာပွဲနှင့် လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲလေးကနေ ရာသက်ပန် မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်လင်တရုးမပြည့်စုံပြီး ဒီလင်ဒီမယား အသက်ထက်ဆုံး ချစ်ချစ်ခင်ခင်၊ ကြင်ကြင်နာနာ နားလည်မှုရှိရှိနှင့် ရိုးမြေတကျ အိုအောင်မင်းအောင် ပေါင်းသင်းနိုင်ကြပါစေ။
Comment by ko byz December 14, 2008 @ 8:07 pm
သမီးလေးးး နောက်ကျဆုတောင်းပေမဲ့ မေတ္တာအတိနဲ့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်.. အသက် ၂၀ပြည့်မွေးနေ့ကစလို့ နောက် နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်.. ချစ်သောသူများနဲ့ အတူတကွ နေရ.. ပျော်ရ.. မော်ရ ပါစေ….
Comment by မေငြိမ်း December 16, 2008 @ 1:48 pm
အရင်နှစ်တွေတုန်းကဆို ငါ့ညီမမွေးနေ့တွေကို အကို သတိရနေကျပါပဲ။ ဒီနှစ်တော့ တချက် သတိလစ်သွားတာနဲ့ အခုမှပဲ ၀င်ဆုတောင်းပေးရတယ်။ စိတ်မဆိုးနဲ့လို့ အရင်တောင်းပန်ချင်သလို ညီမလေး လင်းလက်တယောက် ဘ၀တလျှောက် ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
Comment by ကလိုစေးထူး December 18, 2008 @ 5:12 am
ညီမလေးတို့ နှစ်ယောက် ပျော်ရွှင် အောင်မြင်သော မိသားစုလေး တည်ဆောက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Comment by ကောင်းကင်ကို December 18, 2008 @ 12:33 pm
Comment by hana san December 19, 2008 @ 1:30 am
Comment by hana san December 19, 2008 @ 1:32 am
Congratulations! Nyimalay 🙂
Comment by Anonymous December 20, 2008 @ 8:49 am
မင်္ဂလာရှိသော မွေးနေ့နှင့် ရက်မြတ်မင်္ဂလာဖြစ်ပါစေ ညီမရေ
ဆုတောင်းနောက်ကျသွားတာ ခွင့်လွှတ်ပါနော် 🙂
Comment by CMS December 20, 2008 @ 3:07 pm
အားပါး..မတွေ့တာကြာတဲ့နောက်ပိုင်း ခြေလှမ်းတွေသွက်တယ်ဟေ့…။ အမေရေ…။ နောက်ကားတွေ ကျော်တက်ခံရပြီဗျ…။ Congratulation ညီမရေ…။ သာယာဖြောင့်ဖြူးသောဘ၀လမ်းကို..။ ချစ်သူနဲ့အတူ အသက် ၂၀ ပြည့်မွေးနေ့က စလို့ ပျော်ရွှင်စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေဗျား… 🙂
Comment by BLACK DREAM December 20, 2008 @ 10:41 pm
လင်းလက်ရေ.. ခုပဲ လင်းလက်တို့ပွဲကို ချီးမြှောက်ပြီး ပြန်လာပြီ.. ဘယ်လိုဆုတောင်းပေးရမှန်းမသိဘူး.. ခု စိတ်ထဲမှာ လင်းလက် wedding dress လေးနဲ့ပုံကိုပေါ်ပြီး ဆုတောင်းပေးချင်လာတာလေးကတော့ ကာတွန်းကားတွေထဲကလို..Happily ever after from today onwards ပါနော်… သတို့သမီး အရမ်းလှတယ်ဗျို့.. အားကျပင်မဲ့ လုပ်ဖို့အဖော်ကိုတောင် ရှာပုံတော်ဖွင့်တုန်းမို့ ဖိတ်စာက တစ်ခြမ်းပဲရှိသေးတယ် ညီမရေ…
Comment by mabaydar December 21, 2008 @ 9:56 am
Comment by sin dan lar December 21, 2008 @ 9:56 am
ရည်မှန်းချက်တူညီ ပြည့်စုံပျော်ရွှင်ပြီး အိုအောင်မင်းအောင် ပေါင်းရပါစေဏော်လို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Comment by MELODYMAUNG December 21, 2008 @ 2:55 pm
Comment by khin oo may December 21, 2008 @ 3:09 pm
Happy Birthday Kyal Sin!!!!
ဒီနေ့ ဒီရက်မှာ ကျရောက်တဲ့ ကြယ်စင်ရဲ့ မွေးနေ့နဲ့ မင်္ဂလာရက်မြတ်မှသည်
နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းနှင့်
ပြီးပြည့်စုံပြီး ပျော်ရွှင် သာယာချမ်းမြေ့သော မိသားစုဘ၀လေးကို
ထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်…
ဒီလင် ဒီမယား အိုအောင် မင်းအောင် ပေါင်းရပါစေ… 😀 (လူကြီး ၀င်လုပ်တာ)
Comment by မီးလေး December 25, 2008 @ 10:40 am
ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ ။ အဆင်ပြေပါစေ…
Comment by မောင် မိုးသည်း February 8, 2009 @ 6:32 pm